Iingcamango ezi-38 eziGcweleyo zoGcino lweKhitshi-iZisombululo zoGcino eziLula zamaKhitshi - Hlaziya Kwaye Ukhuthaze
Iingcamango ezi-38 eziGcweleyo zoGcino lweKhitshi-iZisombululo zoGcino eziLula zamaKhitshi
Ukuba ukhona ukusilela kwindawo yokugcina ikhitshi, lixesha lokukhohlisa iikhabhathi , iidrowa , kunyeIsiqithiezimbalwaizisombululo zokonga indawo. Kuya kufuneka uphinde ucinge ezo nooks zincinci kunye ne-niches, kwaye uyakufumanisa ubutyebi obungafakwanga indawo yokubala . Kwaye ngenxa yokuba ukuphefumlelwa okuvunyiweyo ngumyili kuhlala kunceda, sikhanyisa ezona khitshi zinamaqhinga kunye nezicwangcisiweyo esakha sazibona. Ke ukuba ulindele usuku lwedemo okanye ufuna umbono nje okhawulezileyo onako DIY namhlanje, uya kufuna ukubhukumaka le bhetshi yoyilo, izimvo zokugcina ikhitshi ezinobuqili.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Yenza iBhodi yokusika Khetha uAubrie
Xa kufikwa ekufumaneni ubuchwephesha bokugcina kunye nokhuthazo lombutho, akukho ndawo ibhetele kunokujonga ngaphandle kwe Ikhitshi lovavanyo lukaWilliam Sonoma, apho uphawu luzama ngokoqobo amawaka eemveliso. Le yikhabhathi yebhodi yokusika ekhethiweyo egcwaliswe ngokwahlula izinto ezime nkqo ukukhusela iimfumba.
I-meteor yeshawari yeshawari yango-2016
THENGA NGOKU Abahluli beKhabhinethi, $ 18
Mbini Zama ukukhupha i-Pantry USara wanyathela iLigorria
Kweli khitshi lenziwe ngu UEmily Henderson , izinongo, izinto ezomileyo, kunye nezinye izinto ezibalulekileyo zokupheka zigcinwa kwindawo yokugcina izinto. Oku kugcina ukukhutshwa kude kube ngoku kubonelela ngokufikelela ngokulula.
THENGA NGOKU Khupha uMququzeleli, $ 75, amazon.com
3 Yolula ukuya kwiiPhahla
Gcina izixhobo ezingasetyenziswanga kangako kwiikhabhathi eziphezulu. Ukuba awunayo, yongeza ngaphezulu kwe-hood yakho kunye neefestile ukuze ucofe kwindawo yokugcina enokwenzeka. Kweli khitshi lenziwe ngu U-Hecker Guthrie , iikhabhathi zolule phantse yonke indlela eya eluphahleni.
THENGA NGOKU IKhabhinethi Yodonga, $ 150, amazon.com
4 Guqula iCloset Khetha uAubrie
Omnye ummandla eWilliams Sonoma Ikhitshi lovavanyo laseSan Francisco, le pantry yokuhamba / ikhabethe ligcwele zonke izinto zokubhaka ezinokwenzeka. Uvavanyo lwabasebenzi kuyo yonke imveliso abayithengisayo, ke ngoko kukho ingqokelela ebanzi. Ezi yunithi zeeshelfu zibonelela ngendawo engaphezulu yomphezulu wabo bonke.
THENGA NGOKU Icandelo lokuCoca uMnyama, i-128 yeedola
5 Yakha yonke into ngaphakathi UDOUGLAS FRIEDMAN
'Igumbi lonke linemikhwa emnandi, etshayayo,' uyilo lwangaphakathi UMichelle Nussbaumer utsho ngeli khitshi. Kodwa ikwasebenza! Umenzi wekofu, umthengisi wamanzi kunye ne-oveni yesantya zonke zakhiwe ngaphakathi, ezenza ukubonakala okuncinci kakhulu.
THENGA NGOKU Umatshini wekofu ozenzekelayo weThermador, $ 3,999
6 Gcina ngaphezulu kwe Window yakho UStephen Kent Johnson
Nokuba ubungakanani bekhitshi lakho, yonke into encinci ibalulekile xa kufikwa kugcino. Elulaishelufungaphezulu kwefestile kwandisa indawo yokubonisa yeepleyiti, izitya kunye nobugcisa.
THENGA NGOKU Isibiyeli somthi, $ 11, amazon.com
7 Khupha uMenzi weelebheli Khetha uAubrie
Ukuba ubungaqinisekanga ukuba ikhitshi lovavanyo lukaWilliams Sonoma lelona khitshi lilungelelanisiweyo emhlabeni, nabu ubungqina obongezelelweyo. Sula iintloko kunye neelebheli zenza ukuba kube lula ukubonwa kwidrowa yesinongo.
THENGA NGOKU Umenzi welebheli, $ 24
8 Yibeke kumboniso Iikhonkco zeVOL
Kule Ikhitshi leVolV , ezona zinto zintle zibonisiwe eludongeni ukuya eludongeni kubuyiswa ishelfu yeplanga kunye neekhabhi ukuze izinto ezingathandekiyo ezingaphantsi zingene kwiikhabhathi. Ukufakwa kweekhowudi umbala kwongeza imeko ethomalisayo yesingqi kwisithuba, naso.
THENGA NGOKU Isibiyeli seShelf ye-Anthropologie, $ 28
9 Fihla Izixhobo I-EMILY KENNEDY
Endaweni yokugcina izinto zakho zombane, njenge-toaster okanye i-microwave, kwindawo ebonakalayo, sebenza nekhontraktha ye-yoru kunye nomyili wokuza neendlela ezipholileyo zokuzifihla. Apha, UMick De Guilio wenze umnyango we-quartzite otyibilikayo ekhawuntarini ukufihla itreyi yokukhupha i-toaster. Idityaniswa nayo yonke indawo yokubuyela umva kakuhle kwaye igcina ubuhle bokubukeka xa ingasetyenziswa.
THENGA NGOKU I-Smeg Toaster, i-160 yeedola
10 Iqulathe yonke into deVol Kithens
Sukutyeshela amandla enkqubo elungileyo yesikhongozeli. Gcina ukutya kwakho kwizikhongozeli ezinelebhile kunye neengqayi zeglasi ukuze uziphucule kwaye uzilungiselele indlela.
THENGA NGOKU Imigqomo yoGcino, $ 29, amazon.com
Shumi elinanye Faka izinto ezingalindelekanga UDries Otten
Iikhabhathi ezifakwe ngodongwe zivale ikhitshi eliyilwe ngu UDries Otten . Itheyibhile yobhedu engaphantsi kwayo enomnyango otyibilikayo ovumela izinto ezimbalwa ezikhethekileyo ukuba zihlale ngaphandle.
THENGA NGOKU I-AYTM Curva Shelf, $ 99
12 Ukuphinda usebenze kwakhona kwiiOfisi eziDala zeOfisi Ukubuyisela iiRolls
Qhawula iikhabhathi ezindala zokufaka iifayile okanye iitafile zomsebenzi ngokulandelelana njengetafile / itafile yekhonsoli. ULeanne Ford iphakamise eli khitshi ngokuxhoma ubugcisa obukhulu kufutshane neziqwenga zokugcina eziveziweyo. Indawo yokubeka iwayini ebekiweyo isisombululo sokugcina.
THENGA NGOKU Itafile yeConsole yeWebhu ye-CB2, $ 999
13 IiBhodi zokuSika iiHang UJenn Feldman Uyilo
Xhoma izixhobo zokupheka kunye neebhodi zokusika ngaphezulu kwesitovu ukuze kube lula ukufikelela kuzo kodwa ngaphandle kwendlela xa zingasetyenziswa. UJenn Feldman Uyilo igcina yonke into ihlelwe kwitreyi ukuze nantoni na oyifunayo ifumaneke lula kwindawo enye. Ukulungelelaniswa kombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwenza ukubonakala okumanyeneyo.
THENGA NGOKU Umququzeleli we-Urban Outfitters Bin, $ 20
14 Gcina iDinnerware kwiiDraw Ihlathi leFeliks
Kule khitshi yanamhlanje ye-monochrome eyilwe ngu I-Arent kunye nePyke , izitya zangokuhlwa zigcinwa kwiidrowa ezibushelelezi kunokuba zifihlwe kwiikhabhathi ezivalelweyo.
THENGA NGOKU Isivalo sasekhaya seYamazaki kunye noMququzeleli wePan, i-38 yeedola
Shumi elinantlanu Fihla indawo yomsebenzi UMICHAEL PERSICO
Eyilwe ngu UMateyu Ferrarini , eli khitshi ligcwele zizisombululo ezinendawo encinci. Usebenzise ukusonga iingcango zepokotho ukufihla yonke indawo yokubala kunye nekhabhathi eludongeni. Lo iya kuba ngumtshintshi ophambili womdlalo kwigumbi lokufundela ngakumbi.
THENGA NGOKU Abaphuculi beeDolophu Isitishi sokuGcina iKhitshi, $ 299
16 Nika iiDraw Island zakho
Fumana okuninzi kwisiqithi sasekhitshini ngokongeza iidrawing kumacala omabini endawo yokugcina eyongezelelweyo. I-Inn kule khitshi eyenzelwe nguLeanne Ford, izitulo ezingenamqolo zinceda ukutshintsha ikhitshi kwigumbi lokutyela kwaye kulula ukuhamba xa kukho imfuneko.
THENGA NGOKU I-BD Studio Trent Island Island, i $ 2850
17 Qengqa Kwinqwelo yeBhari UFrank omangalisayo
Xa ikhitshi lakho lincinci, kuya kufuneka unikezele iphupha lesiqithi sekhitshi (okwangoku, ubuncinci). Eyona ilandelayo-kwaye eyona ilungele ngokufanelekileyo-into? Inqwelomoya! Inika indawo yokugcina encinci kwaye unokukhetha nenqwelwana encinci yokuqengqeleka kunye nebhola yokubamba yokupheka.
THENGA NGOKU Inqwelo yokuGcina iKhaya eSlim encinci yaseYamazaki, $ 60
18 Khetha iCubby edadayo UDries Otten
Ngombono omtsha wokugcina ikhitshi, zama i-cubby edadayo edibanisa eludongeni endaweni yeeshelfu ezidadayo. Apha, uDries Otten uxuba isitayile esimnandi kunye neempawu zeshishini kule khitshi yahlukileyo. Isinyithi esenziwe ngentsimbi engenanto kunye nokutyhilwa kombhobho wepayipi ngokuchasene neendonga zasemanzini, ngelixa ilaphu eliluhlaza elinemigca likhanyisa imood.
THENGA NGOKU I-Shelf yaseNtshona Elm kunye neeHoks, $ 143
19 Gcina imiphezulu yeetafile icacile UFrank omangalisayo
Gcina indawo yommandla osebenzisekayo icacile ngokukhusela iglasi eyomisa udonga eludongeni ngaphezulu kwesinki. Ikwakhula udonga olumhlophe kwaye ibonelele ngokugcina ngakumbi.
THENGA NGOKU I-Lostine Iron Pot Pot Rack kunye ne-Brass S-Hooks, $ 90
Amashumi amabini Sebenzisa onke amagumbi anokubakho Iikhitshi zeVV
Akukho sithuba singasetyenziswanga kweli khitshi laseDeVol. Ukwandisa ikhitshi elincinci, yongeza iishelfu ezongezelelekileyo kwiindawo ezinokuthi zisebenze kakhulu, ngaphezulu kwesitovu. Emva koko sebenzisa iifestile zakho kwizityalo okanye ezinye izinto ezongezelelekileyo kwaye uxhome intonga kwindawo ephezulu yodonga kwiimbiza, iifaskoti kunye nezinye izinto ezifunekayo ekhitshini.
THENGA NGOKU Iibhotile zePottery Barn ezinokwenziwa ngokwezifiso kunye neeShelfu, $ 15
amashumi amabini ananye Yongeza iishelufu kwi-Backsplash yakho UPieter Estersohn
Ikona engathandekiyo inokwandiswa ngokongeza kugcino olulula.Ukugcinwa kweglasi, ezibekwe ngaphantsi kweekhabhathi, zikunika indawo yokubeka izinto zegilasi-kwaye ukusukela oko iiglasi zihambelana neshelufu, isiphumo phantse asibonakali.
THENGA NGOKU Ikhithi yeShelf yeGlasi, $ 22, amazon.com
22 Hlanganisa i-Rack Rack UFrancesco Lagnese
UKUYAyokubeka ipleyitikunye neepaki zerhasi zibonisa ingqokelela yakho ngelixa ugcina ezi zinto zisendleleni. Ibhonasi: Zifikeleleka ngokulula xa ufuna ukuzibamba.
THENGA NGOKU Rack Plate, $ 10, amazon.com
2. 3 Zama iishelufa zokudada Ngoc Minh Ngo
Iishelufa zokudada macala omabini efestile zibonelela ngendawo yokutya kunye neyeglasi. Sukuba nexhala lokuba unendawo encinci yedonga oza kusebenza nalo: Iishelufu ezincinci zingawenza umsebenzi.
THENGA NGOKU Ishelfu encinci, i $ 24, amazon.com
24 Hlanganisa ikhethini ukufihla izinto Ukubuyisela iiRolls
Xa indawo ephantsi kwesinki sakho sekhitshi ibonakalisiwe kwaye awufuni kugxuma kwikhabhinethi entsha yesiko, phinda ubeke ilinen endala kwaye uyixhome njengekhethini. emva koko yongeza amagwegwe ongezelelweyo ukuxhoma izinto ezinjengeemgs. Unokuncamathisela amagwegwe kwiishelufa ezidadayo ukuze usebenzise ezinye izinto ezantsi kwaye ugcine iindonga zomonakalo.
THENGA NGOKU Ukuhlaziya iRack Hook Rack, $ 69
25 Fumana abaququzeleli beDraw USara wanyathela iLigorria
Nikezela umzobo ekhitshini kwizixhobo ezingahleliwe kunye nezinto eziyimfuneko ukuze uhlale usazi apho unokufumana khona. Kule drowa ekhitshini eyenzelwe ngu-Emily Henderson, kukho iitshaja ezongeziweyo, i-roller roller, izinto zeofisi, kunye necandelo lezitshixo kunye nezibuko zelanga. Sebenzisa abaququzeleli be-lucite ukuze yonke into ibe nendawo.
THENGA NGOKU Umququzeleli weMebbay Drawer, $ 25
26 Yiya nkqo U-ERIC PIASECKI
Musa ukukhawulela ukugcinwa kwiindawo ezinokufikelela kwiingalo. A ukutyibilika ileli ikunceda ufike kwiikhabhathi zokuphakama kwesilingi, ezifanelekileyo kumenzi wesonka ongasokuze umsebenzise.
THENGA NGOKU Iseti yeSlider Ladder, $ 1,191
27 Gcwalisa Imigqomo UVictoria Pearson
I-Declutter ukungcola okuvulekileyo okushelfini kunye negridi yeebhokisi ezilukiweyo. Kweli khitshi laseLos Angeles, iithegi zephepha zigcina umxholo weebhasikithi nganye uququzelelwe.
THENGA NGOKU Iibhaskithi ezilukiweyo, $ 31
28 Hang Hangs Ngokunyanisekileyo kukaKohler
Le shelufu yombhobho wobhedu ibamba amagwegwe eekomityi zekofu kunye nezinto zokupheka, ukugcina i-countertop isimahla ekuphekeni kanye. Kwaye, ijongeka ngokungathandabuzekiyo kwaye yongeza umanyano.
THENGA NGOKU Ishelfu yombhobho wobhedu, $ 54, etsy.com
29 Yenza iibhasiki zesonka ULaura Moss
Iibhasikithi ezakhelwe-ngaphakathi ziya kuphakamisa nayiphi na ikhitshi. Ngale ndlela baya kuhlala behlaziyekile, kulula ukufikelela kubo, kwaye bahambe kude.
THENGA NGOKU Ibhasikithi yesonka seCB2 Knot, $ 10
30 Zama ishelufu UTrevor Tondro
Indawo evulekileyo eshelufini yongeza ukugcinwa okuninzi, kodwa ayithathi mgangatho omninzi-okanye indawo ebonakalayo (ecinga ukuba iyongeza ukuphakama, igxininisa iisilingi eziphakamileyo). I-antique étagère ebekwe kwikhawuntara yale khitshi ibamba iincwadi kunye nezitya.
THENGA NGOKU Icandelo lokuLungisa, i $ 51
31 Yongeza iAntique ULisa Romerein
Iikhabhathi ze-antique azikhawulelwanga kumagumbi okutyela. Yongeza enye ekhitshini lakho ukuze uve isivuno sisasebenza ngokupheleleyo. Ukuhlala okujongeka kuqhekeza ubuqhetseba bemigca yekhabhinethi eyakhelweyo.
THENGA NGOKU IKhabhinethi, i-1384 yeedola, amazon.com
32 Cinga ngeDrawers zeFriji UDOUGLAS FRIEDMAN
Kule khitshi likaMichelle Nussbaumer, iitrayi ezincinci zefriji yiThermador zenza umsebenzi wokuzonwabisa wokulungiselela i-cinch (kwaye zibonelela ngendawo yokugcina ukutya).
THENGA NGOKU I-Sur La Table Marble kunye ne-Glass Conche, i-60 yeedola
33 Fihla i-Clutter UEllen McDermott
Kweli khitshi, zonke iziphithiphithi zifihliwe ngasemva kweengcango ezivaliweyo, ezivulekileyo ukuveza i-pantry ebanzi. Kwaye ukuba ayichukumisi ngokwaneleyo, jonga iibhasikiti zomngcunube ezikhutshiweyo zibambe iziqhamo kunye nemifuno.
THENGA NGOKU Umququzeleli weBhasikithi, $ 20
3. 4 Yongeza iArrockery Drawer JESSIE PRESA
Ezi drawers ekhitshini ziyilwe ngu IKrysta Gibbons zinezikhonkwane ezinokushenxiswa, ukuze zikwazi ukuhlalisa izitya ezinobungakanani obahlukeneyo njengoko iimfuno zakho kunye nokuqokelelwa kweeleware kutshintsha.
THENGA NGOKU Ikhonkco yeBhodi yePeg, $ 123, amazon.com
35 Gcina indawo ngeeSwing Stools UJames Baigrie
Izitulo ezijikelezayo zeediliya ziyadlala, kodwa, okona kubaluleke kakhulu, ziyasebenza, kuba ziphantse zanyamalala xa zingasetyenziswa. Oku kwenza ukuba zilungele ngokukodwa iindawo ezincinci.
THENGA NGOKU Isitulo seSwing, i-500 yeedola
36 Yenza ubuGcisa neeKhabhathi UVictoria Pearson
Ikhuthazwe yidesika yomshicileli weediliya, iikhabhathi kule Ikhitshi laseCalifornia zenziwe ukuba zibonakale njengeedrowa. Oku kudala umahluko obonakalayo ngaphandle kokubeka esichengeni iimfuno zakho zokugcina.
THENGA NGOKU Itrowa Tsala, $ 7
37 Faka iBhodi yokuSika yokuKhupha UJoe Schmezler
Kweli khitshi ngu U-Alice Lane Uyilo lwangaphakathi , ukutsalwa Ibhodi yokusika inomngxunya, eyenza kube lula ukurabha iziqhekeza ngqo emgqomeni wenkunkuma apha ngezantsi. Inguqu epheleleyo yokutshintsha umdlalo.
THENGA NGOKU Ukusika iBhodi, $ 50
38 Zivalele indawo encinci USimon watson
Ikhitshi elincinci lendlu lifihliwe kwindawo yokuhlala eneengcango zokugoba. Inokuvulelwa ukupheka, ize ivalwe xa kufika iindwendwe. Ukuba ujonga ngokusondeleyo, ungawubona umkhondo.
THENGA NGOKU Izikrini ezisongelayo, $ 180
amakhaya ekhonteyina amakhulu okuhambisa
ukungunda kwifenitshala yeplanga
Ngubani tarek el moussa